Hordhac Si Nintendo DS:
DS Nintendo waa la sii daayey oo ay Nintendo 2004 oo taas waxaa loo yaqaan qalabka hore Xararad in ciyaaray dual screens version Nintendo DS kale lite la sii daayay sanadkii 2006 waxay lahayd screen ifaya, miisaan hoose iyo miisaan yar. Nintendo DS sidoo kale awooda uu u consoles'ka DS badan si toos ah ula falgalaan kasta oo kale oo ka weyn Wi-Fi gudahood kala duwan oo gaaban oo aan u baahan in ay ku xidhmaan shabakad jira wireless. Haddii kale, ay ula dhaqmaan yaabaa online adigoo isticmaalaya adeegga Connection Nintendo Wi-Fi-haatan xiran. Dhammaan daydo Nintendo DS isku daro ayaa ka iibisay 154,01 million unugyada, waxaa Console ka bestselling Xararad ciyaarta taariikhda, iyo labaad bestselling Console ciyaarta video ah waqtiga oo dhan samaynta.
Shaashadda hoose waxaa ah xijaab taabasho
Color: kara bandhigeen 260,000 oo midabo
Isgaarsiinta Wireless: IEEE 802,11 oo qaab lahaansho Nintendo ee
Users Multiple ciyaari karo kulan multiplayer isticmaalaya hal kulan kaliya DS
Input / Output: Dekedaha labada kaararka ciyaarta Nintendo DS iyo Game Boy Advance Game baakad, boosteejada u headphones rikoodh iyo microphoneControls: screen Touch, makarafoonka gundhig u ah aqoonsi cod, badhamada A / B / X / Y wajiga, oo lagu daray pad gacanta, L / badhamada garabka R, badhamada Start iyo Select
Features kale: La socosho Picto Chat software in kuu ogolaanayaa ilaa 16 isticmaala in lagu sheekeysto mar; gundhig-waqtiga dhabta ah saacad; taariikhda, waqtiga iyo qaylo; dhaqmaan xiriiri-screen
CPUs: Mid ka mid ah ARM9 iyo mid ARM7
Xoogna rikoodh ku hadla bixinta hareereeya dhawaaqa dalwaddii, waxayna ku xiran tahay software-ka
Battery: Lithium ra'iyi batari bixinta lix ilaa 10 saacadood oo ciyaarta ku kharash afar saacadood ah, taas oo ku xidhan isticmaalka; awoodda lagu badbaadinayo hab hurdada; AC adabtarada
Maxaad doonaysaa Dadka Nintendo DS Emulator:
Maanta waxaan heysanaa badan qalabka Console sare aan ku raaxaysan karaan, dadka qaarkood ayaa weli jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro Nintendo DS horumariyo kulan ee nidaamka, si horumarinta la shaqeeyay tan sano oo isku dayaya in ay ku daydaan nidaamyada Nintendo DS gal ah qalab cusub oo horumarsan.
Taageerayaan Operating Systems Iyo Aragtida DS:
Top Five Emulators:
Desmume waa emulator il furan u shaqeeya Nintendo kulan DS, asal ahaan taasna waxaa lagu qoray C ++ luqadda, waxa ugu fiican ee ku saabsan emulator tani waa in ay ciyaari karaan kulan homebrew iyo ganacsiga aan arrimaha wax weyn oo emulator asalka ahaa ee Faransiiska, laakiin user turjumey luqado kale. Waxaa taageeray badan goodhiyaha Nintendo DS homebrew iyo qaar ka mid ah goodhiyaha Wireless Multiboot, emulator tani naqshadeynta weyn oo marna loogu talla taageero dhawaaq weyn leh cayayaanka aad u yar yar oo hoos.
DeSmuME taageertaa badbaadin dalalka, Dynamic recompilation (Jit), V-u hagaagsan, awood u leeyahay inuu kordhiyo tirada ee shaashadda.
Safeeyuhu si loo hagaajiyo tayada image oo uu leeyahay software (Softrasterizer) iyo haya'ad OpenGL.
DeSmuME sidoo kale taageerayaa isticmaalka makarafoonka ku dekedaha Windows iyo Linux, iyo sidoo kale si toos ah video iyo duubista. Emulator ayaa sidoo kale kasoo muuqday taariikhqorihii a movie dhisay-in.
Khayaadka oo Heer Sare Ah qaab filaayo.
Naqshadeynta oo tayo weyn.
Taageero Microphone ka mid ahaa.
Waddaa inta badan kulamada ganacsiga.
MAYA $ GBA waa emulator ah u Windows iyo DOS. Waxaa taageeri karaan ROMS Gameboy horay ganacsiga iyo homebrew, shirkadda ku andacoonaya sida shil GBA qaababka ugu iftiimiyay ka mid ah badan rasaasta akhriska, taageero multiplayer, ugu rarataan culaysyo badan NDS ROMS No.
Emulator la taageero multiplayer
Rasaasta Multiple loading
Taageero Sound Great
Taageerada ugu badan ee kulamada ganacsiga
Taageero multiplayer waa dhibic oo lagu daray ah
MAYA $ GBA u baahan tahay khayraadka nidaamka yar
Kharashka lacag iyo mararka qaarkood uma shaqeeyo xitaa ka dib markii updates.
Sameeysa Nintendo DS Roor ayaa sii daayay emulator cusub oo xiiso leh Nintendo DS in la isticmaalo iyadoo PC. Tani emulator Nintendo DS waxaa guud ahaan loo yaqaan DuoS iyo haddii aan meel ka baxsan sii daayo hore ee mashruuca qaadan karaan wax ka dibna waxaan ku jirnaa dukaanka wax weyn ka sameeysa taas. Waxaa ku qoran kitaabbadii C ++ iyo awoodo in uu ordo ku dhowaad dhammaan kulan ganacsi hoos Windows, oo ka dhiga isticmaalka qalabka xawaaraha GPU iyo sidoo kale recompiler firfircoon. Emulator Tani waxay sidoo kale waa caan ah in ay awoodaan in ay xitaa ku ordi hoose kumbiyuutarada dhamaadka aan wax gubaya khayraadka xad-dhaaf ah.
Emulator Super-degdeg ah
Taageerada nidaamka gobolka badbaadiyo.
Ordi karaa kulan ku PC gaabis ah ee
Dardargelinta GPU waxay keentaa naqshadeynta nolosha.
Ordi karaa dhammaan kulan ganacsi
Cayayaanka yar yar ayaa.
Xooggan oo waa Nintendo DS emulator Soomi Android. Intaa waxaa dheer in ay awoodaan in ay ku ciyaaraan kulan Nintendo DS xawaaraha buuxda oo ku saabsan hindisooyin badan Android. Versions of Newer emulator sidoo kale taageeri naqshadeynta filtarrada oo ay leeyihiin database ballaaran codes qiyaanoole. Kulan badan oo ay maamulaan xawaare buuxa, halka kulan kale oo weli ay tahay in la filaayo in si ay u ordo. Markii hore waxaa la sameeyey harsan Open Pandora Linux computer ciyaaraha Xararad ah, oo loogu talagalay in uu siiyo bedel fiican u hardware hoos u shaqeeya, laakiin haddana waxaa la UNI- ka soo qalabka android.
In kor loo qaado ciyaarta ayaa 3D naqshadeynta 2 by 2 jeer ay xal asalka ah.
Habee meelaynta iyo inta uu le'eg oo ka mid ah screens DS.
Taageerada naqshadeynta filtarrada iyo khiyaameeyaan taageero.
Codes khiyaameeyaan taageeray
Naqshadeynta Great iyo waayo-aragnimo 3D.
Taageerada tirada kulamada ganacsiga
Cayayaanka iyo shilalka yar ayaa mararka qaarkood.
dasShiny waa Nintendo DS qayb emulator ee Higan multi-madal emulator ah. Higan ayaa waxaa hore loo yaqaan bsnes. dasShiny waa emulator tijaabo ciyaarta video free u Nintendo DS ah, iyo in la horumariyo abuuray by Cydrak iyo ruqsad ka heeysan ka v3 GNU GPL. dasShiny markii hore ka mid ahaa, sida muhiimka ah xaasidnimo Nintendo DS ee multi-habka Nintendo emulator higan ah, laakiin waxaa laga soo saaray in v092 iyo hadda jira sida ay, mashruuc gaar ah u gaar ah. dasShiny ku qoran C ++ iyo C iyo waa diyaar u Windows, OS X iyo GNU / Linux.
Naqshadeynta Good iyo taageero codka
Emulator filaayo in si degdeg ah
Oo ay taageerayaan badan OS
Graphics waa cadaalad ah
Taageero Sound waa wanaagsan
Wuxuu ka kooban yahay dhowr cayayaanka iyo shilalka badan
Arrimaha waafaqsan Game.
> Resource > Emulator > Top 5 DS Emulators - ciyaari DS Games on Qalabka kale